Ahoana no ahafahako mamela ny vata fampangatsiahana?
Maro amin'ireo vehivavy mpikarakara tokantrano no mahazo antoka fa mila mandevina manamboatra fanodikodinam-potoana ny rafitra rehetra. Andeha hiezaka hamantatra raha toa ka izany no izy, ary ahoana no fomba handotoana ny vata fampangatsiahana.
Ilaina ve ny mandoto ny vata fampangatsiahana tsy misy rafitra mangatsiaka?
Noho izany, raha toa ka tsy misy rafitra mangatsiaka (ny fandikan-teny hoe "tsy misy ranomandry"), ny frost dia tsy mamorona eo amin'ny sehatry ny asa anatiny. Raha tsy miorina ny ranomandry, nahoana no tokony halefa amin'ny fanodinana matetika ny vata fampangatsiahana? Raha ny tena izy, ny endri-javatra dia mamorona, fa ny singa fanamafisana dia manampy amin'ny fivoahany, ny rano enti-mitondra dia miditra ao amin'ilay fitoeran-drano, izay itomboany. Mazava ho azy fa tsy ilaina ny manala ny vata fampangatsiahana toy izany, fa tokony hosasana kosa mba hisorohana ny fisian'ny toaka tsy mahafinaritra.
Misy antony iray hafa mahatonga ny rafi-pandrika iray tsy misy rafitra mangatsiaka dia tsy tokony halazo matetika. Raha ritra ny rofy mahazatra mandritra ny 2 ora, dia mila 24 ora farafahakeliny farafahakeliny farafaharatsiny farafahakeliny farafahakeliny ny efitranom-pifamoivoizana miaraka amin'ny rafitra No Frost. Ny rafitra ara-teknika toy ny vata fampangatsiahana toy izany dia sarotra kokoa, ary tsy natao ho an'ny fanodikodinana matetika. Ny tsena dia nanomboka naneho ireo modely nomanina tamin'ny antsoina hoe rafitra feno tsy misy fatrana ("tsy misy fofona tanteraka"). Inoana fa tsy misy ny hafanana ao aminy, na dia ao anaty frizidera aza.
Ahoana ny fomba handotoana ny vata fampangatsiahana?
Ho an'ny tompon'ireo vata fampangatsiahana, izay tsy misy rafitra fiarovan-tena amin'ny fiarovan-tena, dia fomba fanao ilaina ny famoahana. Impiry aho no mila mandoto ny vata fampangatsiahana? Misy mihevitra fa tokony hatao isaky ny telo volana io fepetra io, ny sasany dia manao izany mandritra ny enim-bolana. Ny valin'ny fanontaniana momba ny fampihenana ny fihenan'ny farafara dia miankina amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitrandrahana amin'ny fiposahan'ny ranomandry, ary tsy mitovy amin'ny vata fampangatsiahana isan-karazany, ary na dia avy amin'ny vata fampangatsiahana mitovy amin'ny marika mitovy amin'ny an'ny tompona hafa aza. Raha vao 6 cm ny hatsiaka, dia tokony hosotroina sy hosasana ny vata fampangatsiahana. Ny tahan'ny fampakarana ny ranomandry dia miankina amin'ny antony manaraka:
Faharetan'ny fanokafana ny vata fampangatsiahana. Matetika ny varavaran'ny fantson-tsakafa no misokatra, arakaraka ny rivotra miditra ao anatiny, izay matetika ao anaty lakozia no mivalona amin'ny molekiolan'ny rano, izany hoe "mando". Ny hafanana, miditra ao amin'ny frizidera, dia mitodika ho kristaly amin'ny rambony, mamorona loko matevina amin'ny rakotra ranomandry vaovao.
Fitaovana entina manatsara ny vokatra. Tsy ny Eoropeanina ihany no mitahiry vokatra ao anaty fonosana na tsaramaso manandanja, izay ahafahany mandoto ny rivotra. Ny zava-misy dia ny sakafo rehetra dia misy rano, ary, raha tsy mikatona ny fifamoivoizana, dia loharano mahamay, noho ny fisoratana lolo vaovao ao amin'ny efitranon'ny vata fampangatsiahana.
Tsy mety ny manimba. Indrisy, tsy ny rehetra no mahafantatra ny fomba hanamboarana ny vata fampangatsiahana araka ny tokony ho izy, ary avy amin'io fomba fanao mahagaga io dia miankina amin'ny asa hafa.
Tsy maintsy miala ireo vokatra azo tsapain-tanana isika, satria mety ho afaka 24 ora ny vata fampangatsiahana. Rehefa tapaka ny toeram-pivarotana ny vata fampangatsiahana dia hozongozonina ny hafanana voavoly ao aminy, Esory avokoa ny rindrina rehetra ka tsy misy ny hatsembohana tavela eo amin'izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia tapaka ny fanimbana ary ny entana rehetra dia entina hiverina. Amin'ny alalan'ity fomba ity, dia mitombo ny hafanam-bary mandritra ny volana maromaro. Mba hisorohana ny fananganana haingam-pandeha haingana dia tsy maintsy mametraka ny vata fampangatsiahana ianao mandritra ny 24 ora fara-fahakeliny, raha tsy izany dia tsy hanam-potoana handokoana araka ny tokony ho izy. Ary aorian aorian'izany "maina" izany dia afaka mamerina indray ny vata fampangatsiahana indray amin'ny fomba fiasa. Maro no liana raha azo atao ny manala ny vata fampangatsiahana amin'ny fofona iray. Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy, amin'ny fijerena fiarovana, afaka manatona an'i fenu ianao. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy afaka entina ao anaty vata fampangatsiahana ny hairdriera mba tsy hisotroana rano.
Oliva sy oliva - inona ny fahasamihafana?
Ahoana ny handrafetana mofomamy mafana - ny sakafo matsiro tsara indrindra avy amin'ny sakafo Aziatika
Ahoana no hanamboarana strudel?
Ahoana no fomba madio amin'ny grenady?
Mandarine crusts - ampiasaina ao an-trano
Ahoana ny fametrahana tocchini?
Ahoana ny fomba hanamboarana varneiki amin'ny vareniki?
Sakafo ho an'ny ririnina
Ny sakafo atoandro isaky ny andro
Sakafom-pisiana eo amin'ny latabatra fikarakarana - fomba fanamboarana
Ahoana ny fisafidianana kitapo elektrika?
Famenoana entana fandevenana ho an'ny pancakes
Aspirinina amin'ny akne
Zava-baovao mahaliana avy amin'ny fiainan'i Justin Bieber amin'ny 2016
Hatsikana satroka mofomamy
Chanterelle miaraka amin'ny chanterelles ao amin'ny multivark
Jennifer Aniston sy Justin Thero hanana zanaka?
Fialantsasatra any Maraoka miaraka amin'ny ankizy
Ringworm amin'ny alika - soritr'aretina
Sean Penn sy Charlize Theron
Mailaka tsy misy fanaintainana
Inona ny tombontsoa azo avy amin'ny hazan-dranomasina cashew?